आफ्नै छोरा छोरीकै सामु श’रीर सु’म्पिन बाध्य पारिएकी यी महिलाको कथा, टिप्परमा जे भयो … (भिडियो सहित)
Homeसमाचारआफ्नै छोरा छोरीकै सामु श’रीर सु’म्पिन बाध्य पारिएकी यी महिलाको कथा, टिप्परमा जे भयो … (भिडियो सहित)
February 18, 2021 admin समाचार 6655
एक महिला टिपर च’ढेर उनी घर जान लागेकी थिइन् । उनीसंग साना दुई छोराछोरी थिए । वाहिर ठू’लो पानी परेको थियो । टिपरभित्र साना छोराछोरीको म’स्त निदाएका थिए । विहान पख उनको जिवनमा जे भयो त्यसपछि उनी उजा’डिइन् । विहान पख उनी नि’दाउनै थालेकी थिइन् । उनको श’ रि रमा टिपर मालिकले कु’ कर्म गरे । उनले आफु माथि भएको त्यो घ’टनाको बारेमा उनले श्रीमानलाई बताइन् ।
उनले श्रीमानलाई आफु माथि घ’टेको त्यो कुरा रुँदै सुनाइन् । उनले अब आफु श्रीमानको ला’यक भइन म के गरुँ भन्दै रुँदा उनको श्रीमानले साथ दिए । उनले श्रीमतीलाई लिएर लिएर प्रहरी कार्या’लय गइन् । दुई छोराछोरीको ज्यान को बद’ला तेरो शरिर चाहियो भनेर टि’पर मालिकले ध ‘म्की दिए । उनी छोराछोरीको ज्या’न जोगाउन आफ्नो श रिर सु’म्पिइन् । यो बाध्यतामा परेकी श्रीमतीलाई साथ दिएर न्याय खोज्न हिँडेका यि जोडीले अहिले सम्म न्या’य पाएका छैनन् ।
त्यसरी साना छोराछोरीकै अगाडी आमाको अस्मिता लिने टिपर मालिलाई कार’वाही हुन सकेको छैन । उनीहरुकै अघि उनी छाती फु’लाएर समाजमा हिडेका छन् । अन्यायमा परेका यि जोडी भने मन खुम्च्या’एर बसेका छन् । उनीहरु १० वर्ष देखि काठमाडौमा बस्थे । कोरोनाका कारण लकडाउन हुने अव’स्थामा उनीहरु घर फर्कने निर्ण’य गरे । खेतीपाती बाँझै भएका कारण खेती लगाउन भन्दै उनी टि’परमा छोराछोरी लिएर घर जान हिडेकी थिइन् । कोरोनाका का’रण भएको लकडाउनले अन्य बस र यातायातका सा’धन चलेका थिएनन् । त्यसैले उनी टिपरमा जाने नि’र्णय गरिन् । – इताजा खबरबाट
छोरीलाई काठमाडौं जान्छु भनेर हिँडेकी आमाको बिचबाटै आयो यस्तो खबर, आमा आउने पर्खाइमा छाेरी (भिडियो हे’र्नुहोस)
स्वस्तिमाको ‘ज्यानमारा मुस्कान’मा अल्झिए पल (भिडियो सहित)
April 11, 2022 admin समाचार 1298
एनसीसी कले’जमा बीबीएस अध्ययनरत करिश्मा आफूलाई अभिनयको विद्यार्थी भन्न रुचाउँछिन्। गोरखा स्थायी घर भएकी उनी हाल परि’वारसँगै शान्तिनगरमा बस्दै आएकी छन्। अहिले पछिल्लो स’मयमा निकै नै चर्चीत टिकटक स्टार पनि हुन करिश्मा ढकाल । उनका
हिरासतमा रहेका पल शाहलाइ पूर्वमिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले दीईन कडा द’नक
March 2, 2022 admin समाचार 1813
अभिनेता पल शाह प्र’करणमा मौन रहेका सेलिब्रेटी बिस्तारै बोल्न थालेका छन्। सेलिब्रेटीका धारणा सार्वजनिक हुने क्रममा पूर्वमिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले आफ्नो धा’रणा सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छिन्। उनले एक वयस्कले नाबालिगमाथि यौ’ ‘न स’म्बन्ध स्थापित गर्नु
दुइ ओटा श्रीमान बनाएकी युवतीले यस्तो ना’टक गरेर पैसा लगेको आ’रोप, माइत जान्छु भनेर अर्को श्रीमानसंग हिँडिन् (भिडियो स’हित)
February 13, 2021 admin समाचार 6182
ओटा श्रीमान बनाएकी युवतीले यस्तो नाटक गरेर पैसा लगेको आरोप,माइत जान्छु भनेर अर्को श्रीमान संग टाप (भिडियो सहित)झापा। बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कमाएको सम्पत्ति कु’म्लाएर पूर्व श्रीमानसँग भागेपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ–१ का हिमाल राई न्यायको खोजीमा भौता’रिएका
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231286)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228136)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197277)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195613)